Ian Rush Oo Shaaciyay Midka Ka Muhiimsan Saalax & Firmino %
Roberto Firmino waa ciyaaryahan uu jecel yahay tababare walba oo Premier League inuu kamid noqdo kooxdiisa, waana kan ugu muhiimsan Liverpool, sida uu aamisan yahay xidigii hore ee Reds, ninka lagu magacaabo Ian Rush.
Saalax ayaa wuxuu hada yahay gooldhaliyaha ugu badan ee Premier League iyo Liverpool wuxuu shabaqa soo taabtay 28 jeer, waana in ka badan ciyaaryahan walba, kaasoo hada ka dheela EPL ama si gaar ah Liverpool.
Firmino oo udhashay wadanka Brazil ayaa wuxuu isana yahay ciyaaryahan kale oo dhalin fiican, waana laacibka labaad ee xagaagan ugu gooldhalinta wanaagsan Liverpool, wuxuuna shabaqa soo taabtay 14 jeer, xili uu dheelay 30 kulan.
“Qof walba waa ogyahay sida uu u fiican yahay Mohamed Salah laakiin hadii aad fiirineyso hal ciyaaryahan Liverpool waxay ku tiirsan tahay waa Firmino,” Rush ayaa u sheegay Sky Sports News, ka hor kulanka Liverpool ay la ciyaareyso Crystal Palace Sabtida.
“Marka uu xiran yahay wuxuu ii xusuusinayaa in yar oo naftayda ah, kaliya uma shaqeynayo kooxda, sidoo kale waa ciyaaryahan aad u caan ah – wuu sameynayaa wax walba.
“Waxaa laga yaabaa inuusan si joogta ah u helin 30 gool xilli ciyaareedkii, laakiin wuxuu ka dhigayaa inuu mucaarad sameeyo qaladaad, waa ciyaaryahan naadir ah oo reer Brazil ah, waxaana qabaa in tayadiisa uu ku haboon yahay Premier League.
“Waa ciyaaryahan weyn, tababare kasta waa uu jecel yahay inuu kooxdiisa joogo xidig walba oo isaga oo kale ah, aad ayaan u nasiib badanahay inuu hada isaga noo dheelayo,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay, Ian Rush.